မေးခွန်း OFX und Orbx geht Das?
1 months ago3တစ်နှစ် #1278 by txrace
Wenn လူကို Orbx ကမ္ဘာ့ဖလား Grund Szenerie ဦးထုပ်, kann လူကို da OFX Dateien ဝန်ကိုထမ်းရွက်darüber? Oder beißen sich Dateien` သေဆုံး?
1 months ago3တစ်နှစ် #1289 by guitpik
ဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ OFX တောင်အမေရိက Orbx ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရန်ပုံရသည်။ ငါရှုခင်းအတွက် Orbx အထက်ကတင်လိုက်တယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: txrace